ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် ~ Myanmar Express
ဒီမို ဖက်တီး : ကိုမင်းကိုနိုင်ဟာ ၁၆ နှစ်လုံးထောင်ကျခဲ့တာမို့ သူ့ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာမှမြင်ဖူးခဲ့တယ်။ ကိုမိုးသီးဇွန်ကတော့ တောခိုခဲ့တာမို့ ပြည်ပမီဒီယာတွေက တဆင့်မြင်ဖူးကြားဖူးခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ စွန့်လွတ်ခဲ့မှုအတွက် လေးစားခဲ့တယ်။အခုတော့ သောက်တလွဲပါလားးးးးကိုအောင်မျိုးထွန်းတို့ ၊ ကိုဇာနည်တို့လည်း ဒေါ်စုနဲ့ အမြင်မတူပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဂါရ၀ တရားတော့ ရှိကြပါတယ် .... သူတို့ ရေးတာတွေကို ကျုပ်ဖတ်လို့ ရတယ်ခင်ဗျားက ဘာကောင်လဲ ကိုမိုးသီးဇွန် ... အသက်လည်း ငါးဆယ်ပြည့်ပေါ့ ... ဂျပိုးသူခိုးလို ရိုင်းစိုင်းတယ် .... ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လို မကျင့်ကြံဘူး Shit_Shit ဖြစ်နေပြီ ......( ကိုမိုးသီးရဲ့ အသိမိတ်ဆွေများလည်း ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကျပါ )MrMaung KoThet : STUPIDKhin Maung Htway : ဒီကောင် ဒေါ်လာ ပျောက်တော့မှာမို့ ကရောင် ကတန်း ပြောဖြစ်မယ်.........။Aung Hein : လူ့အဆင့်အတန်းအား ထိုသူပါးစပ်မှ ထွက်သော စကားသည် ပြဌာန်းလေသည်။ လေတိုက်တိုင်းလမ်းပျောက်ရလျှင် ယနေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟူ၍ ဖြစ်လာမည်မဟုတ်။ ယခု လေပုပ်လေသိုးများ တိုက်ခြင်းထက် အဆများစွာ ပြင်းထန်သော ဖိနှိပ်ခြင်းများကို ထို အမျိုးကောင်းသမီးသည် ကြံ့ကြံ့ခံ ရှင်သန်ပြခဲ့ပြီးလေပြီ။ မစင်ဘုပ်နံ့သည် မဇ္ဈူသက နတ်ပန်းရနံ့ကို မလွှမ်းစကောင်းချေ။ နားမလည်သော ထိုလူမိုက်အားသာလျှင် ကရုဏာသက်ရပေသည်။Ah Bayah : အောက်တန်းစားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးSai Zaw : now only you know about moe thee zun ? we never add that kind of people in our friend list :)Moken Lay : အချို့ကပြောတယ် လူတစ်ယောက်ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင်းက အဲဒီလူရဲ့တန်ဖိုးပဲတဲ့။ မိုးသီးဇွန်ဆိုတဲ့လူကြီးရဲ့သမိုင်းကိုလိုက်ကြည့်တော့ ပတ်မကြီးထိုးဖေါက်တဲ့သမိုင်းတွေပဲ ဖုံးနေတော့ ဘယ်လိုတန်ဖိုးသတ်မှတ်ရမယ်တောင် မသိတော့ဘူး။ ပြီးတော့ ကျနော်က သမိုင်းဟာ တန်ဖိုးဆိုတာထက် အနာဂါတ်သာတန်ဖိုးလို့ ယုံကြည်ထားတာမို့ ဒီလူရဲ့အနာဂါတ်ဟာ တန်ဖိုးတွေနဲ့ပြည့်နေမလားကြည့်မိပါတယ် ရှေ့ဆက်လဲ ဒီလူကြီး ဒီလိုပဲ ဘေးထိုင်တောချာက်ပြီး ပတ်မကြီးထိုးခွဲဖို့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အာပလာပေးနေဦးမှာပဲလို့မြင်ပါတယ်။Lay Pyay Soe : မိုးသီးဇွန်ဆိုတဲ့လူက ပညာမပြည့်ခင် ယောင်ယောင်မှားမှား အသိနည်းပါးစွာနဲ့ တောခိုခဲ့လေတော့ ... ဘာမှမသိတဲ့ ကလေးမသာ စကားလုံးတွေပဲ ထွက်ထွက်လာတော့တာပေါ့ ...... အဲဒီ မိုးသီးဇွန် အလကား ဖွတ်ကြား မင်းသားကြီး လုပ်ချင်တဲ့ လူပါပဲ ....Aung Ko Oo : ဒီကောင်ကြီးက တောကြောင်အကြီးစားကြီးပဲ ဘရို တို့ ရေ။ ၈၈ တုန်းကတည်းက ကျောင်းသားမဟုတ်တော့ပါ။အရွယ်လွန်နေခဲ့ ပါတယ်။ဒီဘီလူးတွေနေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ သူ ခေါင်းဆောင်တဲ့"ဒ မ ဖ" ဆိုတဲ့ ပါတီရှိတယ်။ အကုန် "အင်"တွေချည်းပဲ။နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျောက်ပြီး လုပ်စားနေကြတာ။ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ လူကအစ ကြာကူလီ လုပ်နေတာ ဟိုးလေးတကျာ်ကျော်ပေါ့အပုတ်နံ့ က..:))Lay Pyay Soe : သေခါနီး လူတွေ အကုသိုလ်ဖိစီးသမျှ သွေးရူးသွေးတမ်း ဖြစ်သလို ..တစ်သက်လုံး တိုင်းပြည်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို လက်ညိုးထိုး အကြောင်းပြ ရောင်းစား ခဲ့လေသမျှ ခုမှ အကုသိုလ် ဖိစီးသလို သိပ်ကို လူနဲ့ မလိုက်ဖက်တဲ့ ခွေး သာသာ စကားတွေ ထွက်လာတော့တာပေါ့ သနားစရာကောင်းလှပါလား မိုးသီးဇွန်Laythee Htan : မိုးသီးဇွန် = ABSDF ရဲ့ စောက်သုံးမကျဆုံး ကျောင်းသားခေါင်းရှောင်တစ်ဦး။ ABSDF အဖွဲ့သားအချင်းချင်း တောထဲမှာ သစ္စာဖောက်လို့ မှားရွင်းစွတ်စွဲရင်း လူအုပ်စုလိုက်အချင်းချင်း ပြန်သတ်ခဲ့သူ။ အောက်လက်ငယ်သားတွေကို အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ပါးရိုက်အုပ်ချူပ်ခဲ့လို့ ABSDF နှစ်ခြမ်းကွဲရတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ ငွေကို ရှယ်ရာဝင်ယူ မြိုစို့သူ။ တဏှာယူး အကြီးစား စောက်ကုလား မိုးသီး။Kyaw Myat Thu : စောက်ဖတ်လုပ်စရာမှမရှိတာ ဘာလိုလို ညာလိုလိုနဲ့ပြည်ပြေးပြီးထိုင်စားနေတဲ့ကောင်တိုင်းပြည်တွက်ဘာများလုပ်ပေးဖူးလို့လည်း အဟုတ်တာကလွဲရင် စောက်ရူးပဲလို့ပဲပြောတော့မယ်ဒါတောင်ဂါရ၀တရားအရှေ့နည်းနည်းထားထားလို့နောက်မို့ဆိုပိုဆဲခံကမယ်ခင် သံလွင် : အမိယုတ်တော့နုတ်ကြမ်း၏တဲ့Yan Aung : မပြောချင်တော့ပါဘူးဗျာ..။ ဘုန်းကြီးတွေမန်းလေးမှာ ဆန္ဒပြတုန်းကလည်း လူထုကို အုံကြွဖို့ အမေစုက ခိုင်းသလိုလို သူ့ဘလော့ဂ်မှာ စည်းရုံးခဲ့သေးတယ်။ အခု မှတ်ပုံတင်ပြီဆိုတော့လည်း ရစရာမရှိအောင် ပုတ်ခတ်တယ်..။ သူ့သမိုင်းသူရေးနေတာပဲ..။Laythee Htan : ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ လူအများစုရဲ့ သဘောထားကို အလေးပေးလိုက်နာ ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ မိမိ တို့ Funding အဖြတ်ခံရတိုင်း ဘီယာသောက်ပြီး ထိုင်ဆဲနေလို့မရပါဘူး။ ဒါကို ဂေါက်သီးနားလည်ပေးနိုင်ပါစေ။Kyaw Zwa Lwin : တရားတရားဟောပါများ တရားထဲကပါဠိရ၊ စကားစကားပြောပါများ စကားထဲကဇာတိပြ။Khun Thar : ဖြစ်တတ်ပါတယ် ဒါမျိုးတွေက..သိပ်မကြာခင်သူတို့တွေက ငတ်တော့မှာလေဗျာ ။ အစိုးရနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည် ပူးပေါင်းရင် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် ရနေတဲ့သူတွေ ပြန်လာရတော့မှာ ဆိုတော့ သူတို့ကြောက်ကြလေပြီပေါ့ ။Zayar Htun : မိုးသီးဇွန်ကပြောလိုက်ရင်၈၈တွေဘဲတိုင်းပြည်ဦးဆောင်ရတော့မလို၂ နဲ့...88တွေမဟုတ်ရင်တိုင်းပြည်မချစ်ရတော့ဘူးလား...မင်းတို့ ၈၈ တွေဘာလုပ်လဲပြောပါအုံး.Zayar Htun : တွေ့ သမျှ၈၈တွေအရက်သောက်နေတာဘဲတွေ့ တယ်... ဒါလားနိုင်ငံရေး.. ၈၈တွေမုန်းလို့ ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး..၈၈မဟုတ်ရင်ဘဲတိုင်းပြည်မချစ်သယောင်ပြော၂ နေ လို့ မခံနိုင် လို့ ဝင်ပြောတာ..Ma May : ဒီမနက် အသုတ်ဆိုင်သွား ဆိုင်ရှင်ကမေးတယ်မြန်မာပြည်ပြောင်းလဲတော့မှာမို့ အဖွဲ့ အစည်းတခုမှ လစာနဲ့ စာရေးလုပ်ရသူရဲ့မိန်းမက ညည်းသွားတယ် တဲ့ ဒုက္ခပါပဲ ဒီလို ပုံစံဆို ဘယ်နိုင်ငံကထောက်ပံ့တော့ မလဲ ကျမတို့ တော့ လစာတွေ ပျက် ပါပြီ တဲ့ ဟုတ်လားအမတဲ့ ဘယ်လို ဖြစ်ကုန်တာလဲတဲ့ ကျမက အခြေနေမှန်ကိုရှင်းပြလိုက်တော့ အသုတ်ရောင်းသူကတောင် အားလုံးကောင်းစားဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လုပ်တာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဥဏ်နဲသူမှမဟုတ်တာ ဒီလူတွေသူတို့ အတွက်ပဲကြည့်တာကိုး တဲ့(သဘောပေါက်ပါ NGO အကြီးစာပရယ်ပိုဇယ်အကြီးစားတွေ ဘယ်လောက်များခံစားနေရမလဲလို့-)Moken Lay : ကိုမိုးသီးလား အရက်သောက်ပြီး ဖွန်ကြောင်နေတယ်လေရင်ခွင် သစ် : မိုးသီးကအရူး အဖက်လုပ်မနေပါနဲ့ Myat Lay Ngon : အဖတ်မလုပ်တာကတော့ ကျမ တို့မဲဆောက်မှာ နေစဉ်တည်းပါဘဲ၊ သူ့အရှုးကွက်နင်းနေ ကြာနေပါပြီး အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး.။ရင်ခွင် သစ် : ခုအမေရိကားမှာ ဘယ်သူမှသုံးမစားလို့မဲဆောက်မှာပြန်ပြီးလိမ်စားနေတယ်လေMyat Lay Ngon : မဲဆောက် မှာလည်း သူလိမ်လိုမရပါဘူး၊ သူဖွဲ့တဲ့ အဖွဲ့တိုင်း အကွဲအပြဲ ပါဘဲရှင်.။Green Delta : မိုးသီးဇွန်ဆိုတဲ့လူက သူတောခိုနေတုန်းက ဆေးတွေချပြီးဂေါက်နေလားမသိဘူးဗျာ။ သူ့ wall ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများက အခြေအမြစ်မရှိ၊ အဆင့်အတန်းမရှိမှန်းအရမ်းသိသာတယ်။ ဒီလူမဂေါက်လို့ကတော့ သူ့ဆရာတင်မိတဲ့လူက ဒေ၀ဒတ်ဆရာတင်တဲ့လူထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးမယ်။Lin Htein : မြအေးသမိုင်းလည်းသမီးမိုက်ကြောင့်သမိုင်းပျက်ပြီ။Myat Kyaw : စော်ကား မော်ကား..ထိုလူသားကို..ပြည်ပ နှင် ထုတ်...( နှင်ထားတာတော့ ကြာပါပြီ )..မြိုင်ရပ်ပို့ လော့ ..( မြိုင်ရပ်တောင်မှ..ဒီကောင်ဝင်လာရင်.ပျက်စီးမှာအမှန်ပဲ )..လွန်စွာ မိုက်ရိုင်းလှလေခြင်း.....( ပြန်လည်ကောက်နှုတ်ရရင်တော့၈၈ ကျောင်းသားများသည် သူခိုးဂျပိုး အရိုင်းအစိုင်းများဖြစ်သည်၈၈ ကျောင်းသားများသည် နားမလည်သော လူမိုက်များဖြစ်ကြသည်၈၈ ကျောင်းသားများသည် အောက်တန်းစားများဖြစ်သည်၈၈ ကျောင်းသားများကို ဘယ်သူမှ မိတ်ဆွေမဖွဲ့ချင်ကြ၈၈ ကျောင်းသားများ၏ သမိုင်းသည် ပတ်မကြီးထိုးဖေါက်တဲ့သမိုင်းတွေ ဖုံးနေနေပြီး တန်ဖိုးမရှိသူများဖြစ်သည်။၈၈ ကျောင်းသားများသည် ဘေးထိုင်တောချာက်ပြီး ပတ်မကြီးထိုးခွဲဖို့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အာပလာပေးနေဦးမည်ဖြစ်သည်၈၈ ကျောင်းသားများသည် ပညာမပြည့်ခင် ယောင်ယောင်မှားမှား အသိနည်းပါးစွာနဲ့ တောခိုခဲ့ကြသည် ထို့ကြောင့် ဘာမှမသိတဲ့ ကလေးမသာ စကားလုံးတွေသာ ထွက်လာကြသည် ၈၈ ကျောင်းသားများ တောခိုသည်ဆိုသည်မှာ တောထဲမှာ ဆေးချကြခြင်းဖြစ်သည်၊ အဲဒီအရှိန်ကြောင့် အခု ဂေါက်နေကြသည်။၈၈ ကျောင်းသားနာမည်ခံသူများတွင် ကျောင်းသားမဟုတ်သော အရွယ်လွန်နေသူများပါဝင်သည်၈၈ ကျောင်းသားများသည် အကုန် "အင်"တွေချည်းပဲ ဖြစ်သည်၈၈ ကျောင်းသားများသည် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျောက်ပြီး လုပ်စားနေကြသူများဖြစ်သည်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များသည် ကြာကူလီ လုပ်သောကြောင့် ဟိုးလေးတကျာ်ကျော် အပုတ်နံများ ထွက်နေသည်၈၈ ကျောင်းသားများပါးစပ်မှ ခွေး သာသာ စကားတွေ ထွက်လာကြသည်၈၈ ကျောင်းသားများသည် ရိုဟင်ဂျာ ငွေကို ရှယ်ရာဝင်ယူ မြိုစို့သူများ ဖြစ်ကြသည်၈၈ ကျောင်းသားများသည် တဏှာရူးများ ဖြစ်ကြသည်၈၈ ကျောင်းသားများသည် ပြည်ပြေးပြီး ထိုင်စားနေသူများဖြစ်ကြသည်၊ တိုင်းပြည်တွက်ဘာမှ လုပ်မပေးဖူးသူများဖြစ်ကြသည်၈၈ ကျောင်းသားများသည် အမိယုတ်များမှ မွေးဖွားလာသူများဖြစ်ကြသည်၈၈ ကျောင်းသားများသည် ဂေါက်သီးများဖြစ်သည်၈၈ ကျောင်းသားများသည် Fund အဖြတ်ခံရတိုင်း ဘီယာသောက်ပြီး ထိုင်ဆဲတတ်ကြသည် ၈၈ ကျောင်းသားများသည် အရက်သောက်ပြီး ဖွန်ကြောင်နေသူများဖြစ်သည်၈၈ ကျောင်းသားများသည် အရူးကွက်နင်းကြသည်၈၈ ကျောင်းသားများကို ဘယ်သူမှ မဖတ်မလုပ်ချင်ကြ၊ သူတို့ဖွဲ့သမျှ အဖွဲ့အားလုံး ကွဲကြသည်၈၈ ကျောင်းသားများကို ဆရာတင်သူသည် ဒေဒတ်ကို ဆရာတင်သည်ထက် ပိုဆိုးမည်ဖြစ်သည်တွေ့ သမျှ ၈၈တွေအရက်သောက်နေတာဘဲတွေ့ တယ်... ဒါလားနိုင်ငံရေး.. မင်းတို့ ၈၈ တွေဘာလုပ်လဲပြောပါအုံး??ABSDF အဖွဲ့သားများသည် အုပ်စုလိုက် အချင်းချင်း ပြန်သတ်ခဲ့ကြသည်ABSDF အဖွဲ့သားများသည် လက်အောက်ငယ်သားများကို အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ပါးရိုက်အုပ်ချုပ်ကြသည်ABSDF အဖွဲ့တွင် အချင်းချင်း မကျေနပ်တာတွေများပြီး နောက်ဆုံးမှာ နှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့ရသည်NGO များသည် လုပ်စားလို့ မရတော့တာကြောင့် ခံစားနေကြရသည်ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံများ ဒေါ်လာ ပျောက်တော့မှာမို့ ကရောင် ကတန်း ပြောနေကြသည်ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံများသည် သိပ်မကြာခင် ငတ်တော့မှာဖြစ်သည် )၈၈ ကျောင်းသားများသည် အကုန် "အင်"တွေချည်းပဲ ဖြစ်သည်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များသည် ကြာကူလီ လုပ်သောကြောင့် ဟိုးလေးတကျာ်ကျော် အပုတ်နံများ ထွက်နေသည် တွေ့ သမျှ ၈၈တွေအရက်သောက်နေတာဘဲတွေ့ တယ်... ဒါလားနိုင်ငံရေး.. မင်းတို့ ၈၈ တွေဘာလုပ်လဲပြောပါအုံး?? ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံများသည် သိပ်မကြာခင် ငတ်တော့မှာဖြစ်သည် ၈၈ ကျောင်းသားများသည် သူခိုးဂျပိုး အရိုင်းအစိုင်းများဖြစ်သည် ၈၈ ကျောင်းသားများ တောခိုသည်ဆိုသည်မှာ တောထဲမှာ ဆေးချကြခြင်းဖြစ်သည်၊ အဲဒီအရှိန်ကြောင့် အခု ဂေါက်နေကြသည်။ ၈၈ ကျောင်းသားများ၏ သမိုင်းသည် ပတ်မကြီးထိုးဖေါက်တဲ့သမိုင်းတွေ ဖုံးနေနေပြီး တန်ဖိုးမရှိသူများဖြစ်သည်။ ၈၈ ကျောင်းသားများသည် တဏှာရူးများ ဖြစ်ကြသည် ABSDF အဖွဲ့သားများသည် လက်အောက်ငယ်သားများကို အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ပါးရိုက်အုပ်ချုပ်ကြသည် ၈၈ ကျောင်းသားများကို ဘယ်သူမှ မဖတ်မလုပ်ချင်ကြ၊ သူတို့ဖွဲ့သမျှ အဖွဲ့အားလုံး ကွဲကြသည် ၈၈ ကျောင်းသားများသည် ပညာမပြည့်ခင် ယောင်ယောင်မှားမှား အသိနည်းပါးစွာနဲ့ တောခိုခဲ့ကြသည် ထို့ကြောင့် ဘာမှမသိတဲ့ ကလေးမသာ စကားလုံးတွေသာ ထွက်လာကြသည်MEG လျှောက်မရေးပါ၊ မစွပ်စွဲပါ။ အတွင်းသိများက ဖွင့်ချခြင်းသာဖြစ်သည်။ ၈၈ ကျောင်းသားများကို အထင်ကြီးသူများ၊ ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံအင်အားစုများကို အားကိုးသူများ၊ ကျောင်းသားတပ်မတော် အကြောင်း၊ ကျောင်းသားတပ်ဦးအကြောင်း၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအကြောင်း မသိသူများ မှတ်သား၊ သတိထား ကြပါကုန်....။Myanmar Express
Posted in: ဘာလဲဟဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား,ဘာလဲဟဲ့ ရှစ်လေးလုံး
မအေလိုးမိုးသီးဇွန် မင်း စောက်ဆင့်နဲ့ အမေစုကို ဝေဖန်ရအောင် မင်းလို မူဆလင် ကုလားဒိန်က ဘာများ ငါတို့ တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်မှာ မို့ လို့ လဲ။ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဝေဖန်တာက မှတော်တော် ယဉ်ကျေးသေးတယ်။မင်းလို အောက်တန်းဇားကောင်တွေထက် အမေစု က အဆပေါင်းများစွာ တတ်လို့ ၊ နားလည်လို့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်လုပ်နေတာ။ မအေလိုးကြာကူလီ မူဆလင်မိုးသီးဇွန် ။ သွားသွား... မင်းလို ကောင်မျိုး မင်း စောက်ဆင့်နဲ့မင်းတို့ အမျိုးသားရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စကို ပဲ လုပ်နေစမ်းကွာ။ လာမရှုပ်နဲ့ ။မင်းဘာသာ အေးရာအေးကြောင်း ဗလီတက် ပြီး အလ္လာဟ် အော်နေစမ်းပါကွာ။ ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံရေးကို လာမရှုပ်နဲ့ ။ သိပ်မကျေနပ်မှူ တွေများပြီး ပေါက်ကွဲချင်နေရင်လည်း မင်း ရဲ့ ရှေ့ရှေ့က မူဆလင်နောင်တော်တွေလမ်းစဉ်အတိုင်း နီးစပ်ရာ အမေရိကန်ရုံးတစ်ခု ကို အသေခံ ဗုံးခွဲလိုက် ကွာ။ မင်းမကျေနပ်မှုတွေ ပေါက်ကွဲ သွားအောင်လို့ ။ ဒါမျိုးမင်းလုပ်ရဲလား။ မင်းမလုပ်ပါဘူး။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ မင်းက မူဆလင်လူလည်လေ။ သူတောင်းဇား။ မြန်မာနိုင်ငံရေး အခင်း အကျင်းထဲမှာ မင်းတို့ မူဂျာဟစ် ကောင်တွေ ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြံက်ချေးရော သလို ရောပါလာတာကို က တော်တော်ဆိုးတာပဲ။
myanmarexpress is the low-class generation website . Myanmar media association will be very soon asked to take legal action against that low-class web media.
express က bbc မျိုးဖျက်မီဒီယာလိုတော့မဟုတ်ပါဘူး
express ပြောထားတယ်လေMEG လျှောက်မရေးပါ၊ မစွပ်စွဲပါ။ အတွင်းသိများက ဖွင့်ချခြင်းသာဖြစ်သည်။တဲ့ရှင်းနေတာပဲlow-class generation ဆိုတာ အတွင်းသိ မဆင်မခြင် ဖွင့်ချ အတိုက်အခံတွေပဲဒါကြောင့်လည်း အနှစ်၂၀ကျော် ဘာမှဖြစ်မလာတာ
ခွေးမသား MEG ၀ါးလုံးရှည်နဲ့မရမ်းနဲ့ကွ မင်းက ဘယ်လောက်တော်နေတတ်နေလို့ ပြောနေတာလဲ
ရှုပ်တယ်ကွာ .. ကုလား တွေအကုန် သတ် . ....
MEG ပြောတာမမှားပါဘူးလက်ခုတ်က နှစ်ဘက်တီးမှမြည်တာပါ
26 August 2012 08:00
ဟဲ့ဟဲ့ ကြည့်လဲ လုပ်ကြအုံ့နော် ငါ့နာမည်နှင့် တအားနီးစပ်နေတယ် ဟီးဟီး တော်သေးတာပေါ့ တောင်ဥက္ကလာ မဟုပ်လို့PostaComment